Umzi-mveliso we-Assay we-Assay, i-Silicon Carbide Abavelisi beDespoid, igrafitite inqabile - i-XTLCERAMIC
◆ Ukuba umthengi unomzobo, oquka imilinganiselo, izixhobo, iimfuno ezizodwa, sinokuwenza umbungu ngokomzobo.
◆ Ukuba umthengi akanakho ukuzoba, kodwa ube nesampulu, ke kufuneka isampulu kufuneka ithunyelwe kwinjineli yethu, siya kuthi ke siya kuthi gaimedions, kwaye senze umzobo. Emva koko senza ubumba ngokwemizobo.
Ithunyelwe kwinjineli yethu, siya kuthi ke siya kuthi gaimedions, kwaye senze umzobo. Emva koko senza ubumba ngokwemizobo.
Singayifumana intlawulo nge-PayPal, i-Western Union, Gram yeMali, T / T, l / c; I-odolo yesampulu ye-odolo ikwiintsuku ezingama-7-10, ubungakanani be-oda ye-odolo Singakunika inkxaso yobugcisa. Kunye neGuranisi yethu eseMveliso yethu ziinyanga ezili-12.Moya
Imveliso yemvelisoInkqubo :
● Inkonzo ye-OEM / ODM